चुरे बचाउन माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २, २०७६ तस्बिर : केशव थापा
काठमाडौँ — चुरेको बढ्दो विनाश रोक्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । सोमबार मध्यान्ह माइतीघर मण्डलमा भेला भएका युवाले माइतीघरबाट खबरदारी जुलुस वन तथा वातवरण मन्त्रलायमा पुगेर टुंगिएको थियो । जुलुसमा सहभागीले वन काटेर विकास गरेको कि विनाश? पैसाको हात्ती, जंगलको हात्ती, एउटा रुख नरोप्नेले २४ लाख रुख काट्ने लगायतका नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ १३:४५
जसलाई कहीँ जानु छैन
९० को दशकमा नेपाल आएका भुटानी शरणार्थी डा. भम्पा राई भन्छन्, ‘कि आफ्नै माटोमा कि यही शरणभूमिमै मर्छु ।’
भाद्र २, २०७६ देवेन्द्र भट्टराई, अर्जुन राजवंशी
दमक — सन् ९० को दशकपछि एक लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिक देशबाट लखेटिएर शरणार्थी बन्न पुगे । त्यो भीडमा एक जना पात्र यस्ता थिए, जो लखेटिनेहरूको पीडा एवं आर्तनाद पछ्याउँदै आफैं देशबाट बाहिरिएका थिए ।
डा. भम्पा राई । उमेरले ६८ वर्षका लागे । जीवनका पछिल्ला ३० वर्ष उनी आफ्नो भुटानी थातथलो छाडेर शरणार्थी चिनारी लिई बसिरहेका छन् । ‘म लखेटिएर अथवा खेदिएर आएको मानिस होइन । व्यक्तिगतभन्दा पनि मेरो जातिको, मेरो रगतको कुरा थियो यो । उनीहरू मेरो आँखैसामु लखेटिएका थिए, म भने कसरी ‘रोयल सर्जन’ भनेर बसिरहनु ?’
झापाको दमक चोकस्थित डेराघरमा कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै डा. राईले भने, ‘आफ्नो जातिप्रतिको मेरो ड्युटी के हो ? आफ्नो जातिकै रक्षा गर्न नसक्नेले आफूलाई राष्ट्रवादी कसरी भन्नु र ? एकातिर राष्ट्र छ, अर्कातिर जाति छ । के गर्ने भन्ने द्विविधा थियो । तर मैले आफ्नै जातिलाई पछ्याएँ ।’
भुटान सरकारले रिफर गरेको फेलोसिपमा ढाकाबाट सर्जनको पढाइ पूरा गर्ने एक मात्र नेपालीभाषी हुन्, भम्पा । सन् १९८६ मा पढाइ सकेर भुटान फर्किंदा कथित जनगणनाको चर्चा सुरु भइसकेको थियो । गणनाकै नाममा लोत्साम्पा (नेपालीभाषी) लाई थातथलो छाडेर हिँड्ने अवस्था बनाइएको थियो । ‘मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मसँग कुनै समस्या थिएन । म मन्त्रीको तहमा सेवासुविधा पाइरहेको व्यक्ति थिएँ,’ भम्पा भन्छन् ।
१९८९ को अन्त्यतिर भुटानबाट निस्किएर सीमावर्ती भारतीय गाउँ जयगाउँमा पनि भम्पा केही महिना बसे । तर त्यहाँ सुरक्षा खतरा थाहा पाएर उनी शरणार्थी बसेकै झापाको टिमाई किनारामा आई बसे । र, तत्कालै मेडिकल क्याम्प खोलेर शरणार्थीको उपचारमा खटिए । सन् १९९२ को सुरुवातदेखि भुटानी शरणार्थी घर फिर्ती समिति खोलेर र शरणार्थीलाई व्यवस्थित रूपमा शिविरमा राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै भम्पाले टिमाई, खुदुनाबारी, गोल्धापसहितका स्थानमा शिविर राख्न पहल गरेका थिए ।
भुटानी शरणार्थीको घरफिर्तीमा नेपाल–भुटान वार्ताहरू अघि बढिरहे । कथित शरणार्थी वर्गीकरणको काम पनि सम्पन्न भयो । ‘तर राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि भुटानले पन्छाइरह्यो,’ डा. भम्पा सम्झिन्छन्, ‘शरणार्थीले पनि एक/दुई पटक होइन, बारम्बार घर फर्कने कि नफर्कने भन्ने देखावटी फारममा आफ्ना कुरा भरिरहे । अचम्म लाग्ने कुराचाहिँ द्विपक्षीय प्रमाणीकरणबाट सावित भइसकेका शरणार्थीलाई भुटान घर फिर्ता लैजाओ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बोल्न किन नसकेको हो, किन नचाहेको हो ? मलाई सधैं अचम्म लाग्ने कुरा यही हो ।’
भम्पा श्रीमती उर्मिला प्रधानसहित दमक चोकमा भाडा घरमा बसेको २६ वर्ष भइसक्यो । घरबेटी खगेन्द्र गुरागाईँले यतिका वर्षदेखि सस्तो डेरा दिएकामा डा. भम्पा उत्तिकै आभारी छन् । ‘मैले यही दमक बजारमा बसेर हजारौं शरणार्थीको स्वास्थ्योपचारमा सक्दो सहयोग पुर्‍याएँ, तीमध्ये सबैजसो पुनर्वासका क्रममा तेस्रो देश गइरहेको पनि आँखैसामु हेरेर बसेको छु,’ भम्पा भन्छन् ।
पछिल्ला केही वर्षयता पेटसम्बन्धी गम्भीर समस्या भएर थलिएका डा. भम्पा आफूभन्दा बढी आफ्नी श्रीमतीको रोगमा चिन्तित छन् । ५६ वर्षीया श्रीमती उर्मिला पनि दुवै मिर्गौलामा समस्या आएपछि केही वर्षयता डायलाइसिसको भरमा बाँचेकी छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न भम्पासँग पैसा छैन । ‘एकै जना शरणार्थी भए पनि घर फिर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘म एक्लै भए पनि घर फर्कन तयार हुनेछु । तर घरफिर्तीबारे सबै प्रकारका संवाद र उपायमा छलफल हुनै छाडेको अवस्था भने अनौठो छ ।’
डा. भम्पा, टेकनाथ रिजाल, डीपी काफ्ले, बलराम पौडेल जस्ता केही शरणार्थीसँग अझै परिचयपत्र छैन । ‘शरणार्थी समस्या समाधानमा हामी शिविरबाहिर बस्ने भुटानीको त कुरै छाडौं, शिविरमै बस्ने ६ हजारभन्दा बढी भुटानी नागरिकको पनि के हालत हुने हो भन्न मुस्किल छ,’ भम्पा भन्छन् ।
नेपाल सरकारले शिविरमा बाँकी रहेका सबै शरणार्थीलाई स्थानीय बसोबासका लागि तयारी थालेकोबारे भम्पाले पनि केही ‘संकेत’ पाएका रहेछन् । तरआफ्ना बाबु आइतराज राईसहित आमा, बहिनी सबैको अन्तिम संस्कार झापाकै शरणभूमिमा गरेकाले भम्पा पनि आफ्नो अन्तिम इच्छामा ‘दृढ’ भेटिए । ‘म कि शरणार्थी भएरै यहीँ मर्छु, कि भुटान फर्कन्छु । मसँग अरू विकल्प छैन,’ दृढ स्वरमा उनी भन्छन् ।
भम्पाको नाम झापा–मोरङमा छरिएर बसेका भुटानी शरणार्थीका हकमा मात्रै होइन, दमकवासी असहाय र विपन्न नेपालीका निम्ति पनि ‘कल्याणकारी पात्र’ का रूपमा छाएको छ । उपचार सहयोग गर्नुपर्दा भुटानी, नेपाली, शरणार्थी नभनी मद्दत गर्ने उनको बानी थियो । भम्पाको मानवीय सद्भाव र कीर्तिका कारण नेपाल सरकारले उनलाई विपद्का बेला गत वर्ष १० लाख रुपैयाँ सहयोग दिएको थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत रूपमा १ लाख रुपैयाँ सहयोग दिएका थिए ।
‘यथार्थमा भुटानी नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अनेक तवरमा ‘फ्रेजाइल’ बनाइयो, घरफिर्ती कि पुनर्वास भन्दै अनेक पटक जाँच लिने काम भयो,’ भम्पा भन्छन्, ‘फुटबल जस्तै भए शरणार्थी । कहिले यता हिर्कायो, कहिले उता । त्यही लाचारीमा उनीहरू पुनर्वासमा गएका हुन सक्छन् ।’ भम्पा अहिले पनि दमक बजारको आफ्नो क्लिनिकमा उपचार सेवामा गइरहन्छन् ।
श्रीमतीको किड्नी डायलाइसिसमा बिर्तामोड धाउनु पनि छँदै छ । आफ्नो आन्द्राको समस्यामा भारतको सिलिगुडीसम्म जानुपर्ने हुन्छ । ‘हेर्नुस्, म भुटानको आफ्नो थातथलो छाड्दा आफूले टेकेको घरगाउँको माटो लिएर आएको थिएँ । यो माटो मैले अझै राखेको छु, पूजाकोठामा,’ भम्पालाई लागेको अनौठो अनुभूतिको कुरा बेग्लै छ, ‘विगतमा मसँगै स्वदेश फिर्ती गर्ने भन्दै माटोको टीका लगाउने शरणार्थीहरू यहाँसम्म आइपुग्ने गर्थे । अचम्म, उनीहरू त्यो टीका लगाएरै आज अमेरिका पुगिसकेका छन् । म भने घरै फर्कने भनेर बसिरहेको छु ।’
प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ १२:२२
फरार बम्जनको आश्रममा 'राजकीय सान' [तस्बिरहरु]
अन्तत: फर्किए १७५ नेपाली [तस्बिरहरु]
तस्बिरमा मछिन्द्रले उपाधि जितेकाे खेल